अन्तिम संस्कारमा घ्यु शवको मुखमा हालेर टाउकोमा हान्नुको रहस्य के हो ? – Online Nepalaja
February 7, 2021 90
काठमाडौँ- अन्तिम संस्कार मानिसको मृत्यु पश्चात् गरिने संस्कार हो। यो विभिन्न धर्म र संस्कृति अनुसार फरक फरक हुन्छ। जस्तै …..ऋग्वेदी ,यजुर्वेदी ,सामवेदी । त्यस्तै प्रत्येक वेदका अलग् अलग् शाखाहरू हुन्छन् । प्रत्येक वेदशाखाका संस्कारहरू हुन्छन् । नेपालमा अधिक नागरिकहरू माध्यन्दिनीय शाखाका शुक्लयजुर्वेदी छन् ,केही नागरिकहरू सामवेदीहरू छन् भने केही यजुर्वेदी भएर पनि अश्वलायनशाखाका ऋग्वेदी विद्वान कमलाकर भट्टका अनुयायी देखिन्छन् । उनीहरू माध्यन्दिनीय वाजसनेय शुक्लयजुर्वेदका श्रौतसूत्र,गृह्यसूत्र ,श्राद्धकल्पसूत्र, त्रिकण्डिक स्नानसूत्र,जस्ता अतिप्रामाणिक वैदिक ग्रन्थहरू हेर्न छाडी निर्णयसिन्धु नामक एउटा सामान्य निबन्धग्रन्थका आधारमा सारा संस्कारहरू सम्पन्न गर्न पुग्दछन् ।
हिन्दूहरूका निमित्त जीवनको अन्तिम संस्कार अन्त्येष्टि संस्कार हो। मृतकका नातेदारहरूले मृत्युपछिको जीवनमा मृतकलाई सुख र कल्याण होस् भन्ने भावनाले यो संस्कार सम्पन्न गर्दछन्। अन्य संस्कार जस्तै पछिका युगहरूमा यसका अनेक विधि-उपविधिहरू थपिँदै गए र यो एक स्वतन्त्र र महत्त्वपूर्ण संस्कार हुनपुग्यो।
हिन्दूहरूका निमित्त यस लोकको जीवनभन्दा परलोकको जीवन ज्यादै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्त्येष्टि संस्कार अनिवार्य र धेरै सावधानीपूर्वक गर्ने गरिन्छ। हिन्दू धारणामा आत्मा र शरीर अलग हुनु नै भौतिक अर्थमा मृत्यु हो। प्रत्येक मृतकको आत्मा पारिवारिक सन्तति र नातेदारहरूको मायाको कारणले आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर नगएर घरको वरपर नै बसिरहन सक्ने र हानि पुर्‍याउन सक्ने हुनाले यस्तो स्थानसम्म पुगोस् भनेर अन्त्येष्टि संस्कार गरिन्छ। अग्निद्वारा दाहसंस्कार गरेर मृतक आत्मालाई पवित्र बनाउनुको साथै पितृलोकतिर बिदा गरिन्छ।
पितृलोकतिर प्रस्थान गर्दा कुनै पनि कुराको अभाव नहोस् भनेर खाद्यान्नहरू, कपडाहरू र मार्गदर्शनका निमित्त गाईदान गर्दछन्। प्रारम्भमा शरीरलाई जमीनमा गाड्ने वा जलाउने चलन नभएको बुझिन्छ। वैदिककालदेखि मात्र यस्तो चलन लोकप्रिय हुन थाल्यो। बालकको मृत्यु भएमा वा सन्तहरूलाई अग्निमा नराख्ने पुरानो चलन हिन्दू समाजमा अहिले पनि छ। दाहसंस्कार गरेपछि बाँकी रहेको अस्थि अवशेषलाई पुनः कुनै पात्रमा राखेर भूमिमा गाड्ने प्रलचन माध्यन्दिनीय शतपथ ब्राह्मण, श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।
हरेक धर्मको आ-आफ्नै रीतीरिवाज हुने गर्दछ । हिन्दू धर्म शास्त्रका अनुसार कसैको मृत्यु भएपछि अन्तिम संस्कार गरिन्छ । तर, आज हामी हिन्दू धर्मसँग जोडिएको अनौठो जानकारी दिँदैछौँ।
पुराण आदी विभिन्न धार्मिक ग्रन्थका अनुसार मरेपछि मानिसको षेडसंस्कार मध्यको अन्तिम संस्कार गर्ने गरिन्छ । किनभने त्यसको प्रभाव अर्को जन्ममा पर्ने गर्दछ ।
त्यसैले अन्तिम संसकारमा बिना कुनै गल्ती वा त्रुटी सम्पन्न गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । अन्तिम संस्कारमा एउटा महत्वपूर्ण क्रिया पनि गरिन्छ । त्यो हो कपाल क्रिया ।
कपाल क्रिया बिना हिन्दू धर्मका अनुसार अन्तिम संस्कार पूरा हुँदैन । यो क्रिया हेर्नेहरुको मन दुख्छ । तर, गरुड पुराणका अनुसार सैलाई मुखाग्नी दिइन्छ, त्यो बेला धेरै घ्यु शवको मुखमा हाल्ने गरिन्छ । किनभने उसको शिर राम्रोसँग जलोस् ।
सबै जलिसकेपछि मात्र शवको शिरमा लौरोले हान्ने गरिन्छ । यसैलाई नै कपाल क्रिया भन्ने गरिएको छ । शिरमा हान्नुको पहिलो कारण- यदि शिरमा लौरेले चुटेन भने पूरा शिर जल्दैन । अर्को कारण भनेको बिना कपाल क्रिया अन्तिम संस्कार कहिल्यै पूरा हुँदैन ।
दोश्रो कारण धार्मिक मान्यताका अनुसार सांसारिक बन्धनबाट मुक्ती गरेर उसलाई मोक्ष प्राप्ती गराउनु हो । कपाल क्रियापछि मात्र एक मृत व्यक्तिको आत्मालाई मोक्ष मिल्ने धर्मशास्त्रहरुमा उल्लेख छ ।- एजेन्सीको सहयोगमा
Prevबेवारिसे लासको कसम खादै सपनाले गरिन यस्तो खुलासा, बुवा मानेका विनयजंग संग अलग हुनुको कारण यस्तो छ (भिडियो हेर्नुस्)
Nextपो’र्न भि’डियो निर्माणको आ’रोपमा यी चर्चित अभिनेत्री प’क्रा’उ’
भर्खरै यादव पहिलो पटक मिडियामा! लाहुरे राहुल र स्मिताको मिलनपछि सन्तोष दाइलाई के भयो यस्तो (भिडियो सहित)